काठमाडौं, २६ मंसिर: साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक २१ दशमलव ८८ अङ्कले घटेर १ हजार ५ सय २२ दशमलव ८० विन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेमा कारोबार रकम रू. २० करोड १५ लाखले घटेर रू. ४० करोड ५५ लाख पुगेको छ । यस दिन १ सय ४१ कम्पनीको ३ हजार ८ सय १९ पटकको व्यापारबाट ७ लाख ७ सय ३६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत् समूहको परिसूचक ३ दशमलव ८२ प्रतिशत, होटलको ३ दशमलव ५६ प्रतिशत र बीमाको २ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक १ दशमलव ६ प्रतिशत, विकास बैङ्कको १ दशमलव ५१ प्रतिशत, बैङ्किङको १ दशमलव २४ प्रतिशत र ‘अन्य’ समूहको शून्य दशलमव ३६ प्रतिशतले घटेको हो ।